အစဉ်အရမ်းမိတဲ့ ရှင်ဂွမ်းဂွိ: သတိပြုစေချင်ပါတယ်။
လူတွေက ပြောကြတယ် ရှင်ဂွိ က အလွန်ကပ်စေးနည်းတယ်တဲ့။ ရှင်ဂွိက ပြန်ဖြေခဲ့ဖူးတယ်။ အသုံးနဲ့ အဖြုန်းကို ခွဲခြားသိတာပါလို့ ။ မလိုအပ်ပဲ အလဟသဖြုန်းတီးမှုတွေဟာ မရှိတဲ့သူ ငတ်နေတဲ့သူတွေ ကို စော်ကားရာကျတယ်လို့ ။
အခုလို အလေအလွင့်များဖြစ်နေတာ နဲ့ ပါတ်သက်လို့ရှင်ဂွိပြောချင်နေတာကြာပါပြီ။ ဘယ်အချိန်က စပြီး ဒီအတွေးပေါ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်ကျော်လောက် က Western Park မှာ တရုတ်မင်္ဂလာဆောင်ညစာ စားပွဲတစ်ခု သွားစားရင်းနဲ့ တွေးမိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သိပ်ပြီးလေးလေးနက်နက် မရှိခဲ့ပါဖူး။ အခု နာဂစ် ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ဘူးဖေး ညစာ တစ်ခု စားရင်းနဲ့အရင်အတွေးစ ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရှင်ဂွိတို့ နေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးက အရင်းအမြစ်တွေအားလုံးကို ရှင်ဂွိတို့ ကမ္ဘာမြေပေါ်က လူသားအားလုံး မျှတ စားသောက် နေထိုင်ရတာကို မေ့နေတတ်ကြတယ်။ လူဦးရေ တိုးပွားလာတာနဲ့ အမျှ အရင်းအမြစ် (ရေ၊ အခြေခံအစာအာဟာရ) အစရှိတာတွေဟာ မမျှမတဖြစ်လာတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လူတွေက ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်သုံးတာပဲ။ ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးအကုန်ယူမယ်ပေါ့။ တခြားမှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေတဲ့သူတွေအတွက် မတွေး ပေးကြဖူး။ ဒါကို သတိပေးချင်ပေမဲ့ ဘယ်ကစလို့ ဘယ်လို ပြောရရင်ကောင်းမလဲ မသိဖြစ်နေတာပါ။
ကံကောင်းလှစွာပဲ ရှင်ဂွိလို တွေးနေမိတဲ့သူတစ်ဦးရဲ့Power Point တင်ပြချက် ကလေး ကို မိတ်ဆွေတစ်ဦးဆီက ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ရေးမှန်းမသိလို့ credit မပေးနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါ။ ရှင်ဂွိ ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ အကြောင်းအရာလေးမို့ လို့ ပြန်လည် လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ်။ မူရင်း စီစဉ်ရေးသားပေးတဲ့သူကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ မူရင်း အင်္ဂလိပ်လိုတင်ပြချက်ကလေးကိုပါ ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
let this not come to you asasurprise,
have them living around us and in our neighbourhood today,
we can change it with prayers, and
always lendingahelping hand to those in need.
အခု အကြောင်းအရာတွေဟာ သင့်အတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ် တစ်ရပ် မဖြစ်စေလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဟာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေပါ၊
ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာ ရှင်ဂွိ တို့ နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်နီးနားချင်းတွေမှာ ရှိနေပါတယ်၊ ဒီအကြောင်းအချက်တွေပြောင်းလဲဖို့ ဆုတောင်းပေးနိုင်သလို လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို တစ်တပ်တစ်အားကူညီဖို့ ကို လဲ အမြဲလိုအပ်နေပါတယ်။
Don't keep this message to yourself,
thank NATURE for food and water that they already have.
ဒီသတင်းအချက်အလက်ကို ကိုယ့် ဆီမှာပဲ မသိမ်းဆည်းထားပါနဲ့ 
သူငယ်ချင်းမျာကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ။ အဲဒါမှာ ရှင်ဂွိတို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေ လူသားအားလုံးဟာ သူတို့ ရရှိနေတဲ့ အစားအစာနဲ့ ရေအတွက် သဘာဝ ကိုကျေးဇူးတင်လာမှာပါ။
why we have to thank God for the food that we can have easily…
But in the other hand... ironically,
we still waste the food that we buy.
ဒါက ရှင်ဂွိတို့ တွေ အလွယ်တစ်ကူရနေတဲ့ အစားအစာ အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်သင့်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပါပဲ။
ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ခြားတစ်ဖက်ကနေ (သရော်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ) ကြည့်မယ်ဆိုရင်…
ရှင်ဂွိတို့ တွေဟာ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ အစားအစာတွေကို အခုထက်ထိ ဖြုန်းတီးပစ်နေကြတုန်းပါပဲ။
We are so Blessed for the wonderful works of NATURE's hand in our life today,
ဒီနေ့ မှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရရှိမှုတွေအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တစ်တွေရဲ့ ဘ၀တွေဟာ ယခုဆိုရင် သဘာဝရဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် အလွန်အမင်းကံကောင်းကြပါတယ်။
I felt very fortunate to live in this part of the world.
ကမ္ဘာရဲ့ ကံကောင်းတဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းမှာနေခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
I promise not to waste water.
I pray that this little boy be alleviated from his suffering.
အဲဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အစားအစာဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အရသာ မရှိဖြစ်နေပါစေ ဘယ်လောက်ပဲ ဗိုက်ပြည့်တင်းနေပါစေ ဘယ်တော့မှ အလဟသ မဖြစ်စေဖူးလို့ကတိပေးပါတယ်။ ရေကိုလဲ မဖြုန်းဖို့ ကတိပေးပါတယ်။ ဒီကလေးလေးဟာ သူ့ ရဲ့ခံစားနေရမှုတွေမှ လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်က ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အခုလိုခံစားနေရတဲ့အကြောင်းအရာအပေါ် လူသားအားလုံး ပိုမို စာနာခံစားလာတတ်ပါစေ၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေရဲ့ ဖုံးလွှမ်းမှုကြောင့် ကြောင်တောင်ကန်း မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ဆုတောင်းပါတယ်။
that we must never ever take things for granted.
ဒီပုံက ရှင်ဂွိတို့ တွေ ဘယ်လောက်ကံကောင်းသလဲဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး
ရှင်ဂွိတို့ အားလုံး အမှတ်ထင်ထင်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အရာရာကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ ကိုလဲ သတိပေးလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
Think & look at this... when you complain about your food and
the food we waste daily...
ကိုယ် စားနေရတဲ့ အစားအသောက်ကို အပြစ်တင်ပြီး အမြဲလိုလို အလေအလွင့်ဖြစ်စေတဲ့ အခါ…..ဒီပုံကို ကြည့်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါ။
MAY ALL HUMAN BEINGS BE FREE FROM SUFFERING!!!!
လူသားအားလုံး ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခ ဆင်းရဲများမှ လွတ်မြောက်ပါစေ။
Please don't break this,
keep on forwarding it to all our friends.
ဒီအကြောင်းအရာကို မဖျက်ပစ်ပါနဲ့ ။
ကိုယ်တို့ တွေရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို ဆက်လက် လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ။
On this good day,
let's makeaprayer for the suffering in any place around
the globe and send this friendly reminder to others.
အခုလို နေ့ ကောင်းရက်မြတ် အခါသမယမှာ
ဒီကမ္ဘာမြေပေါ် မည်သည့်နေရာမှာရှိတဲ့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သူအပေါင်းအတွက် ဆုတောင်းမှုလေးတစ်ခု ပြုလုပ်ပြီး အခြားသူတွေကိုလဲ နွေးထွေးတဲ့ သတိပေးချက်ကလေးကို ပေးပို့ ရအောင်နော်..
ဒီပုံကို ၁၉၉၄ ခု ဆူဒန်မှာ အငတ်ဘေး ကြုံတွေ့ ချိန်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ပူလစ်ဇာဆု ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ပုံပါ။ အစာငတ်နေတဲ့ ကလေးငယ်က တစ်ကီလိုမီတာ အဝေးက ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အစာရေစာ ဒုက္ခသည်စခန်းကို တွားသွားနေတဲ့ပုံပါ။
လဒ တစ်ကောင် က ကလေးငယ်သေရင် စားဖို့ အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ ဒီပုံက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ် ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မသိကြပါဘူး။ ဓါတ်ပုံဆရာအပါအ၀င်ပါ။ ဓါတ်ပုံဆရာက ဒီပုံကိုရိုက်ပြီးပြီးချင်းလှည့်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်သုံးလအကြာမှာ စိတ်ပျက်မှုများစွာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်။
MY GREAT FRIENDS,DON'T BREAK THIS CHAIN,KINDLY SEND IT TO SOMEONE YOU LOVE, TO ENABLE HIM OR HER SEE WHAT NATURE HAS DONE IN HIS/HER LIFE COMPARED WITH THESE KIDS' DEPLORABLE CONDITIONS.
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ.. အခုပို့ နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းနေတာ မရပ်လိုက်ပါနဲ့ နော်.. ကျေးဇူးပြုပြီး သင်ချစ်ခင်တဲ့ သူတွေဆီကို ပို့ ပေးပါ။ ဒါမှလဲ သင့်သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဒီကလေးလေးတွေရဲ့ လက်မခံနိုင်လောက်တဲ့ ဘ၀တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး သူတို့ ရဲ့ ဘ၀မှာ သဘာဝက ဘယ်လောက်အထိ လုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကို ပိုမိုသိမြင်လာမှာပါ။
Posted by ရှင်ဂွမ်းဂွိ at 10:28 AM
သတိပြုမိပါတယ် တတ်နိုင်သလောက် လည်း အလေအလွင့် နည်းအောင် နေထိုင် စားသောက် သုံးဆောင်ပါတယ် ... :)